हाइब्रिड गाडीको भन्सार छुट खारेज – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
२१ श्रावण २०७७, बुधबार ०५:३३ English
हाइब्रिड गाडीको भन्सार छुट खारेज
निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, १९ मंसिर । सरकारले हाइब्रिड गाडीको आयातमा दिईदै आएको भन्सार छुट खारेज गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले मङ्सिर १६ गतेदेखि लागु हुने गरी हाइब्रिड गाडीको आयातमा दिईदै आएको ५० प्रतिशत भन्सार महशुल छुट र ५० प्रतिशत अन्तशुल्क छुट हटाएको हो ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ वा विद्युतीय उर्जामध्ये कुनै एकको शक्तिबाट चल्न सक्ने हाइब्रिड गाडी आयातमा उक्त छुट दिँदै आएको थियो । अर् मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को बजेट भाषणमै यो ब्यबस्था गरेका थिए । तर ६ महिना पनि नपुग्दै उनले यसअघिको आफ्नै निर्णय फिर्ता लिएका हुन् ।
१९ मंसिर २०७६, बिहीबार १३:४१ मा प्रकाशित